နံနက်စာအတွက် "သော့စေးပိုင်မုန့်" ထမင်းဂျုံယာဂု - Thermomix Recipes | သာဓက
နံနက်စာအတွက် Oatmeal "သော့ထုံးပိုင်" ဂျုံယာဂု
နံနက်စာ721 မိနစ်2 ကလူ၃၃ ကယ်လိုရီ
အဆိုပါဂျုံယာဂု "သော့ထုံးပိုင်" တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် လတ်ဆတ်ပြီးအဆာဖြည့်နံနက်စာ နံနက်ခင်းကိုအရသာပြည့်ဝတဲ့အချိန်တွေအဖြစ်ပြောင်းဖို့သင်သုံးနိုင်တယ်။
အရသာရှိတယ် ထုံးအရသာ အရာ oatmeal ၏ချောမွေ့ texture နှင့် cookie ကို၏ crunchy ထိတွေ့နှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်။ ထို့အပြင်ဤစာရွက်ဖြင့်သင်သတိမထားမိဘဲအမျှင်ဓာတ်များစွာထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။
ဒီမနက်စာကအရမ်းရိုးရှင်းပြီးကလေးတွေတောင်မှသူတို့နဲ့အတူလုပ်နိုင်တယ် Thermomix ကစားစရာ ပြီးတော့သင်ဟာပါဝင်ပစ္စည်းများကိုချိန်တွယ်ရမယ်၊ ထရိတ်အရသာမွေ့မှီနာရီအနည်းငယ်ခန့်ရောထွေးပြီးစောင့်ပါ။
1 နံနက်စာအတွက် Oatmeal "သော့ထုံးပိုင်" ဂျုံယာဂု
2 နံနက်စာအတွက်ဤ“ သော့ထုံးပိုင်” oatmeal ဂျုံယာဂုအကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုပါသလား။
စုစုပေါင်းအချိန်: ၁ နာရီ ၁ မီတာ
10 ဂရမ် agave ရည်
၁ ဇွန်း (ကော်ဖီအရွယ်အစား) အိမ်လုပ် vanilla ငါးပိ (စာရွက်ကိုကြည့်ပါ)
1 ထုံး (zest + ဖျော်ရည်)
10 ဂရမ် chia မျိုးစေ့များ
gluten- အခမဲ့ rolled oats ၏ 65 ဂရမ်
2 gluten- အခမဲ့အစာခြေဘီစကွတ်
ဒိန်ချဉ်၊ နို့၊ ဖြန့်ထားသောဒိန်ခဲ၊ agave ရည်၊ vanilla ငါးပိနှင့်ထမင်းဖျော်ရည် ၂ ခုတို့ကိုဖန်ခွက်ထဲထည့်ပါ။ ကျနော်တို့နေစဉ်အတွင်းကောင်းစွာရောမွှေပါ 30 စက္ကန့်, မြန်နှုန်း 2။ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရောအနှောအောင်မြင်သည်အထိ။
oat အလွှာ, chia အစေ့များနှင့်ထုံး zest ထည့်ပါ။ ကျနော်တို့စဉ်အတွင်းနှိုးဆော် 30 စက္ကန့်, အမြန်နှုန်း 2, left လှည့်။
ကျနော်တို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးမယ့်ကွန်တိန်နာတွေထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးအနည်းဆုံး ၄ နာရီလောက်ငြိမ်သက်စွာနေပါစေ။ တစ်ညတည်းထားခဲ့တာကအကောင်းဆုံး။
အမှုတော်ဆောင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကွတ်ကီးများကိုလက်ချောင်းများဖြင့်ဖြိုခွဲကာအမှုန့်များကိုဂျုံယာဂုထိပ်တွင်ဖြန်းသည်။ Cookie သည်ပျော့ပျောင်းသွားပြီး crunchy texture ကိုမဆုံးရှုံးစေရန်ချက်ချင်းကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်သည်။
နံနက်စာအတွက်ဤ“ သော့ထုံးပိုင်” oatmeal ဂျုံယာဂုအကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုပါသလား။
စပိန်နိုင်ငံတွင်ဂျုံယာဂုသည်နှိမ့် ချ၍ အလွန်လူကြိုက်များသောနံနက်စာဖြစ်သည်။ သို့သော်များစွာသောနေရာများအတွက် ဂျုံယာဂုကိုနေဆဲနေ့စဉ်နံနက်စာအဖြစ်စားနေသည်.
ထို့အပြင်၎င်းသည်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည်စွမ်းအင်နှင့်ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းရှိသည့်အတွက်ပြည့်ဝစုံလင်သောအရာဖြစ်သည် နံနက်ခင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင်ငတ်မွတ်မှုမရှိဘဲရင်ဆိုင်ရမည်။
ကြာမြင့်စွာကတည်းကငါတို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည် ကြွယ်ဝသောပန်းသီးအရသာနှင့်အတူဂျုံယာဂု ထိုအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ဆင်မှုကိုနွေးခဲ့ရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗားရှင်းရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ရောနှောခြင်းနှင့်အနားယူခြင်းသည်၎င်း၏အရသာကိုခံစားရန်လုံလောက်သည်။
ဒီဗားရှင်းperfectlyုံလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် Lactose မပါပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့သည်ဒီသည်းမခံနိုင်မှုအတွက်သင့်လျော်သောစျေးကွက်တွင်ဒိန်ချဉ်၊ နို့နှင့်ဖြန့်နိုင်သောဒိန်ခဲများရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
နံနက်စာပါ gluten မပါဘဲ celiacs သောက်နိုင်တယ်။ ၎င်းတို့သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်သင့်တော်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ထိတ်လန့်စရာများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန် oats ကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။
မင်းကိုပေးဖို့ crunchy ထိတွေ့ ကျနော်တို့က cookies တွေကိုသုံးမယ်။ ပုံမှန်အရာကတော့သူတို့ဟာ Digestive အမျိုးအစားဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ဟာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသူသို့မဟုတ်သင်ရှိနေသမျှကိုသုံးနိုင်သည်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း, သူတို့ကသင်၏အစားအစာနှင့်သင့်လျော်သော။
သင်ဤအတူတူစာရွက်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများနှစ်ဆနှင့်နိုင်ပါတယ် ရက်ပေါင်းများစွာလုပ်ပါ သင်ကရေခဲသေတ္တာထဲမှာရှိသည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒုတိယစက္ကန့်တိုင်းရေတွက်ကြောင်းသင်သိသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပြီးဆုံးခြင်းမပြုမီ ... သတင်းကောင်း !! အကယ်၍ သင်သည်ဤစူပါမနက်စာကိုချစ်မြတ်နိုးပါကအအေးဆုံးနံနက်ခင်းများ၌ပင်ထိုအရသာကိုခံစားနိုင်လိမ့်မည်။ သာ စက္ကန့် ၃၀ မှ ၆၀ အတွင်းအပူပေးရမည် သင်ကဆောင်းရာသီတစ်လျှောက်လုံးသောက်ရန်အဆင်သင့်ရှိလိမ့်မည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ပန်းသီးနှင့်သစ်ကြံပိုးနှင့်အတူ Oatmeal ဂျုံယာဂု / အိမ်လုပ် vanilla ငါးပိ
အခြားချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာဖွေပါ။ ကျန်းမာသောအစားအစာ, လွယ်ကူပါတယ်, အချိုပွဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - သီဟသူရ » ယေဘုယျ » လွယ်ကူပါတယ် » နံနက်စာအတွက် Oatmeal "သော့ထုံးပိုင်" ဂျုံယာဂု
Mayra ဖာနန်ဒက်ဇ Joglar ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်ကဲ့, ပါဝင်ပစ္စည်းများနည်းပါးလာပေမယ့်ဒီအရသာအရသာနှင့်အတူဂျုံယာဂုရှိပါတယ် ... သင်ရွေးချယ် !! 😉
Mayra Fernández Joglar အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ